Somali News 07.14.21 | KWIT
Badhasaabka South Dakota Kristi Noem ayaa shaqada ka joojisay xoghayihii golaha wasiirada ee dusha kala socday xabsiyada gobolka iyo ilaaliyaha xabsiga weyn ee gobolka Sioux Falls kadib cabasho aan la garanayn.
Dacwadu waxay sheegaysaa inay kormeerayaan saraakiisha sixitaanka si joogto ah u dhibaateeya asxaabtooda shaqaalaha ah
Kiisaska cusub ee COVID-19 maalintiiba gudaha Mareykanka ayaa labanlaabmay seddexdii usbuuc ee la soo dhaafay, oo ay keeneen kala duwanaanta kaladuwanaanta ee Delta, heerarka tallaalka oo liitay, iyo kulamada Afraad ee Julaay.
Infekshannada ayaa u booday celcelis ahaan qiyaastii 23,600 maalintii Isniinta, halka ay ka ahayd 11,300 bishii Juun 23. Dhammaan laakiin laba gobol - South Dakota - iyo Maine ayaa soo wariyay in lambarrada kiisaska ay kordheen labadii toddobaad ee la soo dhaafay. Qeybo ka mid ah dalka waxaa ka socda iska caabin tallaal qoto dheer.
Ku dhowaad kalabar Iowans ayaa laga tallaalay COVID-19 49%, Nebraska 48.5%, iyo South Dakota 46%.